Ye-Mon's Personal Pages: May 2008
ယခင် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ကို ဂါရ၀ပြုစဉ်
(ဓါတ်ပုံ - အေအက်ပီ)
လက်ရှိ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်း ကုလသမဂ္ဂ အထွေအထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့် အုတ်ဂူတွင် ဂါရ၀ ပြုနေစဉ်။
4 comments Labels: forget-me-not, politics
4 comments Labels: nargis, sky-full of lies
I am so touched by this MTV clip.
"To the peace loving people of Burma, we support you in this time of crisis. From your friends around the world."
1 comments Labels: nargis, video
5 comments Labels: myanmar, postcode, zipcode
လူမှုကူညီရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ဖြန့်ဖြူးရာ နေရာများ
ပထမဆုံး ဖော်ပြထားသည့်လင့်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိတွေ့ကြုံနေရသော မုန်တိုင်းဒဏ် ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဆောင်ရွက်နေသည့် ကိစ္စများ၊ လေ့လာရန် စာအုပ်စာတမ်းများ စသည်တို့ကို ပြည့်စုံစွာ စုစည်းပေးထားသော ၀က်ဆိုဒ်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေသူ၊ အဖွဲ့အစည်းများအတွက် အလွန် အသုံးကျမည့် သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိနိုင်ကြောင်း လက်တို့လိုက်ပါသည်။
ဆက်လက်ဖော်ပြထားသော လင့်များမှာ မြန်မာပြည်ရှိ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများအကြောင်း သတင်း အချက်အလက် ရရှိနိုင်သော နေရာများဖြစ်ပါသည်။
လင့်ဝေမျှပေးသော ရွှေဂျမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
0 comments Labels: link, nargis
၁၄၊ ၅၊ ၂၀၀၈
ယူကျုမှ ဗီဒီယိုတစ်ခုကို ကြည့်မိပါသည်။ လပွတ္တာ အနီးရှိ ရွာတစ်ရွာမှ လူငယ်တစ်ဦး၏ ကိုယ်တွေ့ ပြောပြချက်များ ဖြစ်ပါသည်။ အပေါ်အင်္ကျီ မပါ၊ ပုဆိုး ခါးတောင်းကျိုက်ဖြင့် လူငယ်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ခွေးခြေပုလေးတွင် ထိုင်နေသည်။ ဗီဒီယို ရိုက်နေသူက မေးမြန်းနေပုံရသည်။
မေးမြန်းသူ။ ။ အကို ဒီဒဏ်ရာတွေက ဘာဖြစ်တာလဲ။
ဘေးမှ လူတစ်ဦး။ ။ ပွန်းတာပေါ့ သစ်ပင်ပွန်းတာပေါ့ သစ်ပင် ဖက်ထားတာ။ သူလည်း မယား နဲ့ သား ပါသွားတာပေါ့။
လူငယ်။ ။ ကလေးလေး တစ်ယောက်ကတော့ ပါးစပ်ကိုက်ထားတာ။
မေးမြန်းသူ။ ။ သြော် .. ကလေးတစ်ယောက် ပြန်ရတယ်။
လူငယ်။ ။ (ခေါင်းငြိမ့်လျက်) ရတယ်။ ပါးစပ်ကိုက်ထားတာ။
မေးမြန်းသူ။ ။ အကို မိသားစု ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိလဲ။
လူငယ်။ ။ လေးယောက်။
မေးမြန်းသူ။ ။ အခု ဘယ်နှစ်ယောက်ပဲ ပါလာလဲ။
လူငယ်။ ။ နှစ်ယောက်ပဲ ပါလာတာပေါ့။
မေးမြန်းသူ။ ။ နှစ်ယောက်က သေတယ်ပေါ့။
လူငယ်။ ။ နှစ်ယောက်က သေတယ်။
ထိုလူငယ်တွင် မိသားစု လေးဦး ရှိသည့် အနက် ဇနီး နှင့် အခြား ကလေး တစ်ဦး ဆုံးပါးခဲ့သည်။ ၄င်းကိုယ်တိုင်ပင် သစ်ပင်ကို တွယ်ဖက်ထားရင်း ကလေးငယ်ကို ပါးစပ်ဖြင့် ချီထားနိုင်၍ နှစ်ဦးသား အသက်ရှင်လာကြခြင်းပင်။
မိမိ ထူးထူးခြားခြား သတိထားမိသည်မှာ ဤမျှ ကြမ်းတမ်းလှသည့် လောကဓံအဖြစ်အပျက် ကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ဖြေကြားသွားနိုင်သည့် လူငယ်၏ အမူအယာကိုပင်။ သူ့ကို ကြည့်ရသည်မှာ မုသားပြောနေသည့် လူတစ်ဦးနှင့် မတူ။ ဖြစ်ရပ်မှန် သတင်းပို့နေသည့် သတင်းထောက်နှင့်သာ ပို၍ တူနေသည်။ လူပုံကမူ သတင်းထောက် တစ်ယောက်နှင့်လည်း မတူပြန်။ တကယ့် တောသူတောင်သား တစ်ယောက်ဟန်ပန်။ ထို့ကြောင့် ဟန်ဆောင် ပြောကြားနေခြင်း မဟုတ်မှန်း သိသာလှသည်။ ဒါဆို .. သူဘာကြောင့် တည်ငြိမ်နေသနည်း။ စာရှုသူ မည်သို့ ထင်ပါသနည်း။ ဗီဒီယိုကို ကြည့်ချင်ပါက ဤလင့်ကို နှိပ်ပါ။
6 comments Labels: nargis
၁၀၊ ၅၊ ၂၀၀၈
လေဘေးဒဏ်သင့် မြို့နယ်များတွင် မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထားရှိသည်ဟု သိရပါသည်။ မိမိတို့ လှူဒါန်းမည့် ပစ္စည်း၊ အစားအစာ၊ ရေတို့ကို ထို ကော်မတီများမှ တဆင့် လှူဒါန်းနိုင်သည်ဟု လည်း သိရှိရပါသည်။ သို့ရာတွင် ကော်မတီနှင့် ကြိုတင် ညှိနှိုင်းထားခြင်း မပြုပဲ အလှူပစ္စည်းများ ယူဆောင်ပြီး သွားရောက်ပါက ကိုယ်ထိလက်ရောက် လှူရန် အခက်အခဲ အနည်းငယ် ရှိတတ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေး ကော်မတီများ နှင့် ကြိုတင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပါရန် အကြံပြုပါသည်။
0 comments Labels: nargis, public health
ရန်ကုန်တိုင်း နှင့် ဧရာဝတီတိုင်း အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ စာရင်း
Name of Townships
Dagon Myothit (Seik Kan)
0 comments Labels: burma, myanmar
၄၊ ၅၊ ၂၀၀၈
ရန်ကုန်မှ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းများ
လေဘေး သတင်းကြားရ၍ စိတ်မကောင်းပါ။ ပြည်ပရောက် မြန်မာများမှ တတ်နိုင်သရွေ့ အကူအညီ ပေးချင်ကြသည်ဟု သိရပါသည်။ အဆင်ပြေပါက ကျွန်တော့်ကို အမြန် ဆက်သွယ်ပေးပါ။
အောက်ပါ အချက်အလက်များ သိလိုပါသည်။
ထိခိုက်သည့် မြို့နယ်များ၊ အိမ်ခြေ၊ လူဦးရေ
ကယ်ဆယ်ရေး နှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေးအတွက် မည်သည့် အဖွဲ့အစည်းများက အဓိက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသည်
NGO များ ၀င်ရောက်ကူညီခွင့်ရှိမရှိ နှင့် မည်သည့် အဖွဲ့များ ဆောင်ရွက်နေသည်
ငွေကြေး၊ ပစ္စည်း စသည်တို့ကို လှူဒါန်းရန် မည်သည့်အဖွဲ့၊ မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကို မည်သို့ ဆက်သွယ်ရန်
3 comments Labels: request